Ubomi bendoda yanamhlanje buhluke kakhulu kwaye buzalisekile, bufuna uxinzelelo olukhulu. Kunzima kakhulu ukufunda indlela yokuphucula ixesha elifunekayo kwixesha lokuphila, ngoko ke ingxaki enkulu yabantu banamhlanje. Sitshisa iipakethi zokulala iipilisi kunye neepakethi zethu, singacingi ngendlela echaphazela ngayo impilo yethu. Iindlela zokuthobisa zihlala zilungiswe kwikiti yokuqala yokunceda nayiphi na umntu. Makhe sibone indlela yokuphumla, ukufumana amandla kwaye uzive uphilile kwaye ujabule.
Kutheni uziva ulele?
Umbuzo odla ngokuzibeka, mhlawumbi wonke umntu wamanje: "Kutheni ndihlala ndidiniwe?" Kukho izizathu ezininzi. Okokuqala, luhlobo oluthile lwesifo esibangela amandla akho, okanye mhlawumbi uziva uzixinezelekile kwaye uxinzelelo lwengqondo. Kwimeko okanye kwimeko enjalo, ngaphezu kokukhathala, kunyuke ukunyanzeliswa. Ukuba awuthathi amanyathelo okukhawuleza ukuphelisa ukukhathala, unokufumana iingxaki zempilo ezinzulu.
Yintoni ekumele ibe yithuba leeholide?
Umntu ufuna iintlobo ezahlukeneyo zokuphumla. Okokuqala, ubusuku obugcwele ubuthongo. Ngaba uyayazi ukuba ukungabikho kokulala kokulala kwabasetyhini kunobungozi kakhulu kunabantu? Ikhokelela ekugugeni kwasekuqaleni, iingxaki zempilo kwaye enye yezinto ezibangela ukuxinzeleleka kwengozi, ukubetha kunye nokuhlaselwa kwentliziyo. Ukukhethwa ngokufanelekileyo ixesha lokuphumla kukukhuthaza ukwandisa ubomi bakho. Kwiminyaka emininzi edlulileyo, ngokweminye uphando olubanzi, izazinzulu zafika kwisigqibo sokuba ubomi obude kunabo bonke balala ubusuku bonke ngeeyure ezingama-7-8. Umyinge wokufa wabantu abalala ngaphantsi kwakuphezulu.
Yiya kulala ngokukhethekileyo ngexesha elifanayo. Umntu owaziwayo uSophia Loren akazange alale emva kwe-9 ntsimbi. Usuku lwakhe lwaqala ngo-6 ngentsimbi ekuseni. Ubiza le nto eyimfihlo yobuninzi bakhe nobutsha. Kucetyiswa ukuba ulale ngokuqhubekayo, ukuba iphupha liphazamisekile ngesizathu esithile, umntu uya kuziva ephukile kwaye ediniwe. Idibene nenyaniso yokuba kwisigaba sokulala kwezigaba ezimbini ziyaziwa: zihamba ngokukhawuleza kwaye zikhawuleza, zithatha indawo. Kwisigaba sokulala okucothayo ubuchopho buhlala kwaye bubuyisa, oko kukuthi, ukuba uvuka kule nqanaba, umntu uya kuziva ediniwe. Nangona kunjalo, khumbula ukuba ixesha elide kakhulu liphupha njengento embi kwimpilo, kunye nokuntula okungapheliyo kokulala.
Ukongeza kokulala okupheleleyo, umntu ufuna ukutshintsha kwisigqi sobomi. Sekude ixesha lokusebenza lihlala, ixesha lokuphumla kufuneka libe.
Ewe, kuyimfuneko ukuqwalasela imithwalo yemithwalo eyenziwa ngumntu. Namhlanje, abasebenzi baneenqobo zabo. Ukuba awusebenzisi le khomputha kakhulu, kodwa ngokubanzi uxoxisana ngefowuni okanye kumntu, udinga iminzuzu eyi-15 ikhefu zonke iiyure ezimbini. Ukuba umntu wenza imisebenzi enzima okanye umsebenzi wengqondo, ukuphuka kwakhe kufuneka kube ngama-2-3 iiyure.
Namhlanje, izazinzulu azivumelani nokokuba ikhefu kufuneka lihlale ixesha elingakanani. Abanye bakholelwa ukuba umntu uhlala kuphela kwi-15% yazo zonke iintsuku, kuba kufuneka "atshintshe" ukusuka komnye umsebenzi kwisinye isigqiba sobomi. Elinye iqela lezinzululwazi likholelwa ukuba kubalulekile ukuthatha iholide rhoqo kangangoko kunokwenzeka, kodwa ngaphantsi kwexesha. Kwaye ixesha elilodwa kufuneka likhethwe ngabanye phantsi komqathango womzimba womntu ngamnye. Ngenye indlela, izazinzulu ziyavuma into enye - wonke umntu kufuneka aphumle aze abuyisele amandla abo.
Umntu ngamnye uvakalelwa kukuba usebenza kangakanani. Zama ukuzinyatha ngokucophelela, ungagxili umzimba wakho, kwaye ngokuqinisekileyo uya kukubulela. Khumbula, wena wedwa.
Unyango kunye nobuncwane kunye nemveliso yezofuya
Indlela yokuzola iingxaki zakho kwiminithi engama-1
Isityalo seClematis, iimpawu zonyango
I-Aromatherapy ebusika: iibusika ezibalulekileyo zeoli
Diuretics ukulahleka kwesisindo
Imigaqo yokuqulunqa itekisi yezoshishino
Inkululeko - xa kuthe rhoqo kubangela ulonwabo, uthando-xa ukuthembeka kuvuya
Ikhefu "I-Lady's whim"
Yintoni akufanele ifuneke kumntwana?
Uthando lwe-horoscope umfazi wamanzi
Ngeliphi iCawa lePalati 2016? Bhiyozela iNgeniso yeNkosi
Ukutshisa nokuSonka: I-recipe ekhawulezayo yenkukhu eshushu ebomvu kunye ne-pasta